Andian-drano maloto ranomasina | Fiaretana haran-dranomasina
Andian-drano maloto any an-dranomasina
Aug 31, 2021 | Vaovao
Ny maloto no manampy betsaka amin'ny fandotoana ny morontsiraka. Na izany aza, vitsy ny olona miresaka momba ny loto amin'ny rano maloto. Mandritra andiana hetsika sy hetsika vaovao an-tserasera dia hiresaka sy hamariparitra ity olan'ny ranomasina goavana ity izahay ary ireo fomba fanavaozana ampiasaina hiresahana azy.
Jereo ny firaketana an-tsary momba ny lozisialy Ocean Sewage:
Fiatrehana ny fandrahonana amin'ny fandotoana maloto any an-dranomasina - Dr. Stephanie Wear avy amin'ny The Nature Conservancy dia nanomboka ny andiany miaraka amin'ny topy maso ny fiantraikan'ny maloto amin'ny tontolo iainana, haran-dranomasina, ary ireo vondrom-piarahamonina amoron-tsiraka, ary manao ny tranga hoe nahoana isika no mila mihetsika ankehitriny mba hanalefahana ny fahalotoan'ny rano maloto.
Rano maloto 101 - Christopher Clapp avy amin'ny The Nature Conservancy dia nanolotra fampidirana ny fototr'ilay rano maloto, anisan'izany ny topy terminologie, ny fomba fiasan'ny rafitra septika (ary tsy nahomby), ary ny fomba fitantanana ny rano maloto, fitsaboana ary famoahana any an-dranomasintsika mivantana sy ankolaka.
Long Island sewage Story Fizarana I & Fizarana II - Stuart Lowrie sy Christopher Clapp avy amin'ny The Nature Conservancy dia nitantara ny ezaka 10 taona hanoherana ilay nitro nampivadi-po.Gen olan'ny fandotoana any Long Island, New York ary ovao ny paradigma amin'ny fitantanana rano.
Fahafantarana ny fiantraikan'ny maloto any Hawai'i - Ny mpitantana ny haran-dranomasina sy ny mpahay siansa any Hawai'i dia nizara ny fomba hamoahana sy hahafantarana izay ao anaty rano.
Tetikasa fanalefahana maloto erak'izao tontolo izao - Vondron'olona manampahaizana manokana no nizara vahaolana fanalefahana maloto sy fanabeazana mifandraika amin'ny fiaraha-monina any Afrika, Amerika Latina ary Etazonia
Fampiharana ny fomba fijerin'ny fitondran-tena amin'ny fandotoana maloto - Katie Velasco avy amin'ny Ivotoerana ho an'ny fitondran-tena sy ny tontolo iainana Rare dia nanazava ny antony ilantsika vahaolana mifandraika amin'ny fitondran-tena mba hiatrehana ny olan'ny fahalotoan'ny rano maloto.
Ahoana ny fomba hanatsarana ny fahasalamana amin'ny haran-dranomasina ny fiasana amin'ny sehatry ny fahadiovana - Ny tontolon'ny manampahaizana avy amin'ny sehatry ny Rano, Fahadiovana ary Fahadiovana (WASH) dia nampahafantatra anay ny asan'izy ireo eo amin'ny sehatry ny fampianarana, izay mikendry ny hiarovana ny fahasalamam-bahoaka sy ny tontolo iainana. Nianarantsika ny fomba hamenoan'ny tanjon'izy ireo ny anay sy ny fomba hiaraha-miasa amin'ny sehatry ny WASH hampihenana ny fandotoana ny maloto ary hanatsara ny fahasalaman'ny vatohara.
Vahaolana ho an'ny Podcast Video fandotoana rano maloto - Carlos García avy ao amin'ny The Nature Conservancy dia niresaka momba ny fampiasana ny faritra mando any amin'ny Repoblika Dominikanina mba hanomezana rano fitsaboana rano maloto. Taber Hand, avy amin'ny Wetlands Work, dia nanazava ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny HandyPods, rafitra mifototra amin'ny kaontenera noforonina mba hanompoana tanàna kely na lemaka amoron-drano.
Fianarana ho avy: Fandotoana ny rano maloto
Vahaolana ho an'ny Podcast Video fandotoana rano maloto
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoManorata amin'ny gazetinay vaovao hahazoana vaovao momba ny siansa sy tetikady farany, fanadihadiana momba ny tranga vaovao sy famintinana ny gazety, ireo tranonkala ho avy, ary ireo hevi-baovao momba ny haran-dranomasina manerana izao tontolo izao. Mba hijerena ny vaovao nasongadina teo aloha, tsidiho ny Pejy vaovao.